Milan oo aad uga carootay fal uu sameeyay M’Baye Niang (Muxuu mudan karaa?) – Gool FM
Milan oo aad uga carootay fal uu sameeyay M’Baye Niang (Muxuu mudan karaa?)
(Milano) 09 Juunyo 2016 – Kooxda AC Milan ayay dhici kartaa inay ganaax gorodda u geliso M’Baye Niang kaddib markii uu baraha bulshada soo geliyey isagoo si lagu tilmaamay qayrul mas’uulnimo kasoo boodaya meel sare, waxaana dhici karta inay iibiyaan.
Laacibka ayaa muuqaal soo dhigay Instagram-ka iyadoo la arkayey isagoo kasoo boodaya saqafka guri fillo ah isla markaana kusoo boodaya berked dabaaleed, taasoo dhaawac halis ah u keeni karta.
Kooxda Rossoneri ayaa awal usoo joogtey Niang oo shil gaari galay bishii Febraayo iyadoo aan hadda ku qancin habdhaqankiisa is maqiiqa ah.
Sida uu qorayo La Gazzetta dello Sport, naadiga ayaa ganaax u diyaarinaya laacibka, halka la guddoomiye Adriano Galliani laga yaabo inuuba iska iibiyo, gaar ahaan waxaa laacibka bishii Jannaayo doonaysey Leicester City.
SAWIRRO: Xulka Spain oo soo gaaray France iyagoo maanka ku haya inay difaacdaan koobka Euro